Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | KMS 2019: Fantatra ireo hanao velakevitra
Gazety Taratra, 20 Aogositra 2019
KMS 2019: Fantatra ireo hanao velakevitra
Nosoratan'i Hary Razafindrakoto, gazety Taratra, 20 Aogositra 2019, pejy 9.
Nifarana ny fandraisana ny famintinana ny velakevitra hotontosaina mandritra ny Kônferansa Momba ny Soratra.
Nifarana ny fandraisana ny famintinana ny velakevitra hotontosaina mandritra ny Kônferansa Momba ny Soratra taona 2019 (KMS 2019) karakarain'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT). Enina ireo handray anjara ka tsikaritra fa manana ny maha samy hafa sy ny maha manan-danja azy avokoa ny tsirairay. I Gaby kely: Ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana manoloana ny asasoratra ankehitriny, i Jirom-panahy Licence poétique, i Mihanta: Ny asasoratra ankehitriny: ny firoborobony, ny olany, ny vahaolana azo aroso, i Poety Rebely Teknika sy torohevitra fomba famoronana slam-poezia, I Voniary: Teny Gasy 2.0: Ny teny malagasy any amin'ny Aterineto, i Ravorombato: Ny tantara an'onjampeo: Ny tantarany, ny anjara toerany, ny olana sedrainy.
Marihina fa ankoatra ny velakevitra, anisan'ny zava-dehibe ao amin'ny KMS ny fahafahana mifanakalo hevitra eo amin'ny mpanatrika sy ireo hanatanteraka ny velakevitra. Hevitra maro no mipoitra izay ezahina ny handraikitra azy ireny ao anatina tahirin-kevitra toy ny boky hanatsarana ny tontolon'ny asasoratra amin'ny ankapobeny.